Dowladda Puntland oo keentay agabkii lagu fududayn lahaa shirka nabadaynta colaadii Qoriley iyo Gumburka Cagaare | puntlandi.com
Dowladda Puntland oo keentay agabkii lagu fududayn lahaa shirka nabadaynta colaadii Qoriley iyo Gumburka Cagaare
Garowe (Puntlandi) Wasiirka Arrimaha Gudaha Dowladda Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timacade ayaa qalab loogu talagalay shirka nabadeynta beelaha walaalaha ah ee Bahararsame iyo Cumar Maxamud ku wareejiyey guddiga nabadaynta labada beelood.
Qalabkaan oo kasoo dagay dekeda Bosaso, ayaa ah agabkii loogu talo galay ergooyinka nabadaynta iyo goobta shirka lagu qabanayo oo ah degaanka Meygaagle oo ku dhow Burtinle, halkaas oo la doonayo in lagusoo afjaro colaada beelaha walaalaha ah.
Wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in shirka nabadaynta la qabandoono maalmaha soo socda islamarkaana dowladda Puntland ay diyaarisay kaalinteeda uga aadanayd fududaynta shirkaas, sida uu sheegay shir jaraa’id oo qalabkaan uu kusoo bandhigayay.
Colaadii ka taagnayd degaanada Qoriley iyo Gumburka Cagaare, ayaa 30-kii bishii december ee sannadkii hore waxaa laga gaaray heshiis horudhac ah oo ka koobnaa qodobadaan hoos ku xusan.
2. Ciidamadoo lakala qaado
3. Shir mudo bil ah gudeheed laysugu yimaado gogoshana ay dhigto beesha xaga Burtinle soo xigta
4. In qofkii wax dila lasoo qabto oo beesha wax laga dilay lagu soo wareejiyo haddii dambiiluhu fakadana beeshiisa 20 oday laga soo xiro sidoo kale 200 oo geel ah laga soo qaado.
5. In ammaanka deegaankaas Itoobiya sugto iyo qodobo kale.